Mohamed Salah oo loogu baaqay inuu ka tago Liverpool oo uu ku biiro kooxda… – Gool FM
Haaruun June 24, 2019
(Liverpool) 24 Juunyo 2019 – Weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona, Samuel Eto’o ayaa ugu baaqay Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah inuu u dhaqaaqo garoonka Camp Nou.
Salah ayaa dhaliyey 71 gool 104 kulan oo uu u saftay kooxda Liverpool tan iyo markii uu naadiga Merseyside-ka kaga soo biiray Roma sanadkii 2017-kii.
Real Madrid ayaa abuurtay xiisaha ay u qabto xiddigan xulka qaranka Masar kaasoo 27 goor shabaqa u soo taabtay tartammada oo dhan kooxda uu hoggaamiyo tababare Jurgen Klopp xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Yeelkeede, Eto’o ayaa shaaca ka qaaday in Barca ay ku haboon tahay qaab ciyaareedka 27-sano jirkaan Salah.
“Barcelona waxa ay noqon lahayd mid aad ugu wanaagsan, Real ayaa i siisay fursad aan kaga tago Afrika, laakiin waan garanayaa qaabka Barcelona, waxaana qabaa inay u fiicnaan lahayd isaga.” ayuu Eto’o u sheegay Suxufiyiinta.
“Haddii uu fursad u helo inuu ka ciyaaro horyaalka adduunka ugu fiican, kaasoo ah horyaalka heerka koowaad ee Isbaanishka, waa inuu u saxiixo Barcelona, Mo wuxuu leeyahay wax walba oo ku noqon karo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka.”
Salah ayaa la soo warinayaa inuusan xiiseynaynin inuu ka tago xagaagan garoonka Anfield, laakiin waxa laga yaabaa inuu raadiyo inuu ka dhaqaaqo kubadda cagta England dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Gabdhaha Sweden oo gaaray siddeed dhammaadka Koobka Adduunka Dumarka 2019 kaddib markii ay garaaceen Canada.. + SAWIRRO